China Iipleyiti ezintathu zeHole Gripper abavelisi kunye nabathengisi | Yolanda
iintsimbi ezinyusa iintsimbi
Iipleyiti ezintathu zeHole Gripper
Ipleyiti yentsimbi echanekileyo igutyungelwe ngumgangatho ophezulu onzima, irabha yevumba elisezantsi enophawu olubomvu.
Ukubamba okuphezulu kwirabha yokuthintela kuthintela izixhobo / ukonakaliswa komgangatho kwaye kunciphise kakhulu ingxolo.
Kulula ukulayisha kwaye ukothule, ukhululekile ukuphatha izibambo ezintathu, kulula ukuzithwala, ukulayisha kunye nokwehlisa, iziko le-concave linciphisa umngcipheko wokucinywa kweminwe xa kulayishwa isikhokelo.
Ukufakwa kwentsimbi engenasici kuvumela ubunzima ukuba butyibilike ngokulula bonyuke ngaphandle kokonakalisa intonga yentsimbi.
Ingasetyenziswa ngentonga yentsimbi okanye ingasetyenziswa yodwa. Kufanelekile kakhulu ukugcina isimo somzimba, ukomeleza izihlunu kunye nomzimba oqingqiweyo.
Ibhodi yokuphakamisa ubunzima ingasetyenziselwa umthambo wokuzilolonga kunye noqeqesho lokunyamezela, kunye nokwandisa ukuguquguquka kunye nokulingana. Isitya esinye sobunzima sinokusetyenziselwa umthambo wokuzifudumeza.
Ukuzivocavoca kunye nokusetyenziswa kwekhaya: Ukuphakamisa ubunzima kunenzuzo ezininzi. Inokukunceda ukuba wakhe amandla kunye nezihlunu. Ukomelela kwakho, izihlunu onazo zininzi
Igama lebrand: Yolanda Fitness / Ipleyiti Uhlobo: Amacwecwe amathathu e-Hole Gripper / Ipleyiti Sebenzisa: Iinjongo ezininzi / Ipleyiti Ubunzima: 2.5 / 5/10/1/5/20 / 25KG / Ikhola yokuvula: 50.6MM
Ukugqiba kuyanceda ukunciphisa ingxolo yempembelelo kwindawo ethe cwaka, yokuzivocavoca kancinci kwindawo yakho yokuzivocavoca ekhaya. Ukugqibelela kuqeqesho lwezihlunu kunye nokulingana. Imingxunya emi-3 yoyilo lokubambelela kwesandla, ukungatyibiliki, ukunxiba ukuziva okunganyangekiyo kunye nokuva kakuhle kwesandla. Umgangatho ophezulu wetyhidiweyo webarbell sheet, yi-eco-friendly, ucoceko. Ngaphakathi inkqubo yentsimbi eqinileyo yomelele kwaye ihlala ihleli i-Gym kunye nokusetyenziswa kwekhaya: Ukuphakamisa ubunzima kunenzuzo ezininzi. Inokukunceda ukuba wakhe amandla kunye nezihlunu. Ukomelela kwakho, kokukhona izihlunu ozenzileyo zenziwe ngentsimbi eqinileyo kwaye zipeyintwe ngepeyinti emnyama ukunqanda ukutyibilika kunye nokubetha.
* Ipleyiti yokuphakamisa iintsimbi inokusetyenziselwa uqeqesho lwezihlunu kunye noqeqesho lokunyamezela, kunye nokonyusa ubhetyebhetye kunye nokulinganisela. Isitya esinye sobunzima sinokusetyenziselwa umthambo wokuzifudumeza. Ukwenza imithambo eyahlukeneyo: yonyusa ukuxhathisa kwizikwere, ukuphakamisa ubunzima kufanelekile kwii-biceps zakho, i-triceps, ihips, izihlunu zomlenze, amagxa, umva
Egqithileyo Intambo yokutsiba yokutsiba kwintambo yokuzilolonga
Okulandelayo: I-dumbbell ehlengahlengiswayo 24KG
Isliphu esirhabaxa sokumelana neebhendi zebhooty
Non zelanga Soft Yoga Block
I-dumbbell ehlengahlengiswayo 24KG
I-Adjustbale Cast Iron Kettlebell Iiseti zobunzima
Amacandelo ama-8 eHula Hoop enobunzima
Hayi. 42, 4 Jinfeng Road, Jinfeng Community, Village Mifeng, Yipeng Street, Dajiangdong Industry Cluster Zone, Hangzhou, Zhejiang, China 311225